Aghọ a Fundraising Volunteer | Bromley, Lewisham & Greenwich Mind
Ị nọ ebe a: Home > Jobs > Aghọ a Fundraising Volunteer
Aghọ a Fundraising Volunteer
NJ Job: 4486
N'ebe ọ bụla
Ezitere 2 afọ gara aga
Nbanye ịdebanye aha Job a
O di nwute, n'ihi Covid-19, ugbu a enweghi atumatu ego ihu na ihu ebe anyi choro enyemaka nke ndi oru aka. Agbanyeghị, anyị nwere olile anya na anyị ga-alaghachite ihe omume n'oge na-adịghị anya ma mgbe anyị mere, ịmara na anyị nwere otu ndị ọrụ afọ ofufo raara onwe ha nye nke anyị nwere ike ịkpọ ga-enyere aka mee ka ihe omume ahụ gaa nke ọma ma nweta ego dị mkpa.
Wepụta onwe gị ma nyere anyị aka ịgbanwe ndụ ndị obodo gị
Anyị na-achọ ọtụtụ ndị ọrụ afọ ofufo na-agbakọ ego nwere ike itinye aka na mmemme na mmemme anyị, yana inyere anyị aka ịkwalite ọrụ ọrụ ebere anyị.
Ọrụ dị iche iche dị iche iche, yabụ ị nwere ike ime ihe masịrị gị.
Ma ị ga-achọ inye aka otu ugboro n'afọ site na ịwụ bọket ma ọ bụ sonye na ịhazi mmemme ego, anyị ga-achọ ịnụ n'ọnụ gị.
Volunteer Ohere dị.
Soro ndi otu anyi na enweta ego
Obere ndi otu anyi weputara ihe ndi a n’eme kwa ubochi n’ime afo, dika ihe anyi na-eme na ulo uka ndi ekeresimesi. Ga-esonye na ịhazi ma ọ bụ ịga mmemme ndị a, yana ị nweta echiche ọhụụ gbasara ego. Where ga-ezute kwa ọnwa atọ iji hazie ma hazie mmemme a.
Ọbụna ma ọ bụrụ na ị nwere ike inye aka na mmemme ụfọdụ, mee ka kpọtụrụ.
Nchịkọta ịwụ na ihe omume ego ndị ọzọ
Anyị na-agba ịnakọta bọket n'ime afọ na ebe ndị dị ka nnukwu ụlọ ahịa, ama egwuregwu bọọlụ na ebe ịzụ ahịa. Site na enyemaka gị anyị nwere ike ime karịa!
Anyị nwekwara ọtụtụ ego na-eme ego anyị chọrọ nkwado na, gụnyere:
Kwadebe / ịgba ọsọ ụlọ na ihe omume
Na-ekele ndị na-agba ọsọ marathon
Inyere aka na ntule ule abali
Ihe mere ị ga - eji bụrụ onye ọrụ afọ ofufo
Nweta ahụmịhe na nghọta n’ime ụwa maka inye onyinye ego
Ohere iji nyeghachi ndị obodo gị
Ohere isoro ndi mmadu ohuru ma nwee obi uto!
Mee ihe bara uru mgbe ị na-ewepụta ego iji melite ndụ nke ndị bi na nsogbu ahụike ọgụgụ isi na mgbaka
Ihe anyị chọrọ n'aka ndị ọrụ afọ ofufo anyị na-enweta ego
Jikere ịbata maka otu n'ịgba nkata banyere ọrụ afọ ofufo na obi ụtọ ka anyị na-elele zoro
Ochicho maka inweta ego
Nwee mmasị na Bromley, Lewisham & Greenwich Mind na ọrụ anyị na-arụ
Ịnụ ọkụ n'obi na-anọchite anya ma anyị ma ụkpụrụ anyị na mpaghara
Bụrụ onye mara mma, rụọ ọrụ nke ọma n'etiti otu egwuregwu ma nwee nnukwu mmekọrịta mmekọrịta iji kwalite ọrụ!
Dabere na ọrụ ahụ, ịnwere ike ịdị gị mfe iji email na ịntanetị
Anyị na-achọsi ike ịnụ site na onye ọ bụla nwere ahụmịhe ma ọ bụ nwee mmasị n'ịhazi nchịkọta na nchịkọta ego. 'D gha abu ihe bara uru nye ndi otu enyi anyi.
Ihe ị ga-atụ anya n'aka anyị
Itinye n'ọkwa na Ọzụzụ
Nkwụghachi ụgwọ mmefu ego.
Nkwado sitere na Nchịkọta Ego ma ọ bụ Nchịkọta Ego (dabere na ọrụ)
Anyị nwere ike ịnye ọrụ karịa 18s.
Ọ bụrụ n’inweghị akaụntụ, biko mepụta nke mbụ. Mgbe ahụ ị nwere ike ịmepụta ma nyefee profaịlụ dị n'ịntanetị. Pịa 'Tinye maka ọrụ' n'okpuru iji gaa n'ihu.
Iji tinye maka ọrụ a ịkwesịrị mepụta akaụntụ ma nyefee profaịlụ dị n'ịntanetị.
Ọ bụrụ na ị nwere akaụntụ, biko banye. Ma ọ bụghị ya, pịa "Nyefee Ntanetị N'ịntanetị" iji gaa n'ihu.
Onye Ọkachamara Ọrụ IPS
Onye na-enye ndụmọdụ gbasara isi ike
Ndị Ọrụ Na-akwado Ndị Ọgbọ
Ndị Ọrụ Ọzụzụ Ndị Ọgbọ